Umgaqo-nkqubo wokubuyiselwa kwemali-IiMpompo zeKhitshi, iipompo zokugcwalisa imbiza, iiBhafu yokuhlambela | WOWOW
Ikhaya / nkqubo Refund
Sinomgaqo-nkqubo weentsuku ezingama-30 zokubuya, oko kuthetha ukuba uneentsuku ezingama-30 emva kokufumana into yakho yokucela ukubuyiselwa.
Ukuze uvumeleke ukubuyela, into yakho ifanele ikwimeko efanayo nale uyifumeneyo, engafunanga okanye engasetyenziswanga, enamathegi, kwaye ekupakishwe kwayo kwasekuqaleni. Uya kufuna kwakhona irisithi okanye ubungqina bokuthenga.
Ukuqala ukubuyela, ungaxhumana nathi ku-services@wowowfaucet.com. Ukuba imbuyekezo yakho yamkelwe, siza kukuthumela ilebheli yokuhambisa yokubuyela, kunye nemiyalelo yendlela kunye nepakheji yakho yokuthumela. Izinto ezithunyelwe kuthi ngaphandle kokucela kuqala ukuba zibuyiswe azisayi kwamkelwa.
Unokuhlala unxibelelana nathi nganoma yimuphi umbuzo wokubuya ku-services@wowowfaucet.com.
Umonakalo kunye nemiba
Nceda ujonge iodolo yakho xa usamkela kwaye uqhagamshelane nathi kwangoko ukuba loo nto inesiphene, yenzekile okanye ukuba ufumana into ephosakeleyo, ukuze sikwazi ukuvavanya umba kwaye siwulunge.
Ngaphandle / izinto ezingenabuyiswa
Iindidi ezithile zezinto azikwazi ukubuyiselwa, njengezinto ezinokonakala (njengokutya, iintyatyambo, okanye izityalo), iimveliso zesiko (ezinje ngeeodolo ezikhethekileyo okanye izinto ezenziwe ngabantu), kunye neempahla zononophelo lobuqu (ezinjengeemveliso zobuhle). Asikwamkeli ukubuyiswa kwezinto eziyingozi, ulwelo olunokutsha, okanye iigesi. Nceda unxibelelane ukuba unemibuzo okanye inkxalabo malunga nento yakho ethile.
Ngelishwa, asinakho ukwamkela ukubuyiswa kwezinto ezithengiswayo okanye amakhadi esipho.
Eyona ndlela ikhawulezayo yokuqinisekisa ukuba ufumana into oyifunayo kukubuyisa into onayo, kwaye nje ukuba imbuyekezo yamkelwe, yenza ukuthenga ngokwahlukileyo kwento entsha.
Siya kukwazisa xa sele siyifumene kwaye sayiphonononga imbuyekezo yakho, kwaye sikwazise ukuba imali-mali ivunyiwe na okanye hayi. Ukuba wamkelwe, uya kubuyiselwa ngokuzenzekelayo kwindlela yakho yentlawulo yoqobo. Nceda ukhumbule ukuba kungathatha ixesha ukuba ibhanki yakho okanye inkampani yamakhadi etyala ikwazi ukwenza kunye nokuthumela imali kwakhona.
Ukuba ukubuyiswa kubangelwa ngumthengi, umthengi ufanele ukuba abenoxanduva lokuthumela. Umrhumo othile kufuneka usekwe kwinkampani oyikhethayo.
Ukuba kungenxa yezizathu zethu, iimpahla ezifunyenweyo zonakalisiwe okanye azichanekanga, kwaye umthengi akanyanzelekanga ukuba athwale umrhumo wokuthumela ngenxa yesi sizathu.
Akukho mrhumo wokuphinda uhlawulelwe abathengi xa kubuyiswa imveliso.